Uncedo Ngexesha Lentlekele: Xa Kukho Intlekele, Uthando Lusiqhubela Esenzweni
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiCebuano IsiChichewa IsiChitumbuka IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMarathi IsiMongolia IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPonapea IsiPunjabi IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTigrinya IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiValencian IsiXhosa IsiYoruba IsiZapotec (saseLachiguiri) IsiZulu
Ngamaxesha obunzima, amaNgqina kaYehova anceda abo akhonza nabo nabanye abantu. Oko akwenza ngenxa yothando, uphawu abonwa ngalo amaKristu okwenyaniso.​—Yohane 13:35.
Apha ngezantsi kudweliswe iindlela aye anceda ngazo kwiinyanga eziyi-12 eziphela phakathi ku-2012. Akuthethwa nto ngolunye uncedo oludla ngokunikelwa, njengezinto zobuthixo nolweemvakalelo. Iiofisi zamasebe zimisela iiKomiti Ezinceda Ngexesha Lentlekele ukuze zikhokele kulo msebenzi. Ukanti namabandla asekuhlaleni asoloko efak’ isandla.
EJapan: NgoMatshi 11, 2011, inyikima eyabangela itsunami yantlitha kumantla weJapan yaye ngamakhulu amawaka abantu abachaphazelekayo. AmaNgqina kaYehova asehlabathini lonke afak’ isandla ekuncedeni kuloo mmandla ngokunikela ngemali, ubuchule nezinto anazo. Bukela ividiyo yethu ebonisa ngemigudu eyenziweyo ukuze kuncedwe ngexesha lentlekele eJapan.
EBrazil: Amakhulu-khulu abantu abulawa zizikhukula, ukukhukuliseka komhlaba nodaka oluninzi olwehla ezintabeni. Kuloo mimandla yayehlelwe yintlekele, amaNgqina kaYehova athumela iitoni eziyi-42 zokutya okungaboli msinya, iibhotile zamanzi eziyi-20 000, iitoni eziyi-10 zempahla, iitoni eziyi-5 zezinto zokucoca, amayeza nezinye izinto.
ECongo (EBrazzaville): Kwagqabhuka iziqhushumbisi ezazilahliwe zaza zabhodloza imizi yamaNgqina kaYehova emine, zokonakalisa neminye yamaNgqina eziyi-28. Loo maNgqina anikwa ukutya neempahla, yaye aya kuhlala kwamanye amaNgqina.
ECongo (EKinshasa): Abantu ababenekholera banikwa amayeza. Abo babethwaxwe zizikhukula ezazibangelwe zizandyondyo zemvula banikwa izinto zokunxiba. Abo bakwiinkampu zeembacu banikwa amayeza, iimbewu zokulima neempahla ezininzi.
EVenezuela: Izandyondyo zemvula zabangela izikhukula nodaka oluninzi olwehla ezintabeni. Iikomiti ezinceda ngexesha lentlekele zanceda amaNgqina ayi-288. Kwakhiwa izindlu ezingaphezu kwe-50. Ukongezelela, ezi komiti zinceda abo bahlala kumakhaya onakaliswe kukunyuka komkhamo wamanzi eLake Valencia.
KwiiPhilippines: Kwinxalenye yeli lizwe inkanyamba yabangela izikhukula. Isebe lathumela ukutya nempahla yabo bonakalelweyo, yaye emva kokuba amanzi ewuthile amaNgqina asekuhlaleni ancedisa ekucoceni.
ECanada: Emva komlilo omkhulu owatshisa ihlathi laseAlberta, ibandla laseSlave Lake lafumana imali eninzi yomnikelo kumaNgqina ahlala kuloo mmandla ukuze incedise ekucoceni. Ngenxa yokuba lalingazi kuyisebenzisa yonke loo mali, eli bandla lanikela ngaphezu kwesiqingatha sayo ukuze kuncedwe abantu abehlelwe yintlekele kwezinye iindawo.
ECôte d’Ivoire: Iimpahla, indawo yokuhlala nonyango lwanikwa abo babelidinga ngaphambi kwemfazwe eyayikweli lizwe, ebudeni nasemva kwayo.
EFiji: Izikhukula ezibangelwe zizantyalantyala zemvula, zemka neefama ezaziphila ngazo iintsapho ezininzi zamaNgqina ayi-192. Ancedwa nangokutya.
EGhana: Amaxhoba ezikhukula ahlala kummandla okwimpuma yeli lizwe anikwa ukutya, imbewu aza akhelwa nezindlu.
EUnited States: Kumazwe amathathu inkanyamba yonakalisa imizi yamaNgqina eyi-66, yaza yatshabalalisa eyi-12. Nangona abaninimzi abaninzi beneinshorensi, kwanikelwa ngemali yokubanceda.
EArgentina: Amabandla amaNgqina kaYehova anceda abantu abahlala kumazantsi eli lizwe abanemizi eyayonakaliswe luthuthu lwentaba-mlilo.
EMozambique: Abantu abangaphezu kwabayi-1 000 ababefunyenwe yimbalela banikwa ukutya.
ENigeria: AmaNgqina ayi-24 awayekwingozi yebhasi emanyumnyezi ancedwa ngemali. Kwancedwa nabanye abantu abaninzi beli lizwe ababengenazindlu ngenxa yeemfazwe zobuzwe ezibangelwa lunqulo.
EBenin: Amaxhoba ezikhukula anikwa amayeza, impahla, iinethi zeengcongconi, amanzi neendawo zokuhlala.
EDominican Republic: Emva kweNkanyamba uIrene, ibandla lasekuhlaleni lancedisa ekulungiseni izindlu nangezinye izinto ezifunekayo.
E-Ethiopia: Kwimimandla emibini eyayinembalela nomnye owawunezikhukula, kwanikelwa ngemali ukuze kuncedwe abo babechaphazelekile.
EKenya: Kwanikelwa ngemali yokunceda abantu ababefunyenwe yimbalela.
EMalawi: Kwancedwa abo babehlala kwinkampu yeembacu eDzaleka.
ENepal: Ukukhukuliseka komhlaba kwabhodloza ikhaya lelinye iNgqina. Lanikwa indawo yokuhlala yokwexeshana yaye lalincedwa libandla lasekuhlaleni.
EPapua New Guinea: Xa kwatshiswa izindlu zamaNgqina ezisibhozo ngabom, kwenziwa amalungiselelo okuba ziphinde zakhiwe.
ERomania: Izikhukula zemka nemizi yamanye amaNgqina. Ancedwa zaphinda zakhiwa.
EMali: ISenegal yanikela ngemali yokuthengela ukutya abantu ababengafumananga sivuno sihle ngenxa yembalela.
ESierra Leone: Oogqirha baseFrance abangamaNgqina banyanga amaNgqina kaYehova ahlala kwimimandla egquba imfazwe.
EThailand: Amaphondo amaninzi antlithwa zizikhukula. Amaqela anceda ngamaxesha entlekele alungisa aza acoca amakhaya ayi-100 neeHolo zoBukumkani eziyi-6.
ECzech Republic: Emva kokuba izikhukula zonakalise imizi emininzi kweli lizwe, amaNgqina ahlala eSlovakia eselumelwaneni aza kunceda.
ESri Lanka: Umsebenzi omninzi wokulungisa umonakalo obangelwe yitsunami ugqityiwe.
ESudan: Kwathunyelwa ukutya, impahla, izihlangu namashiti kumaNgqina kaYehova awabalekiswa ngumlo owawukweli lizwe.
ETanzania: Xa kwakusina izandyondyo zemvula eyabangela izikhukula, iintsapho eziyi-14 zalahlekelwa zizinto ezinazo. Amabandla alapho anikela ngeempahla nezinto zasendlwini. Enye indlu yaphinda yakhiwa.
EZimbabwe: Komnye ummandla weli lizwe kuye kwagquba indlala ngenxa yembalela. Abo babefunyenwe yile ndlala banikwa ukutya nemali.
EBurundi: Kunikelwa uncedo nonyango kwiimbacu.